Turbine rivotra mitsivalana
Turbine rivotra mitsivalana FK
S turbine rivotra mitsivalana
Turbine Rivotra mitsangana
Turbinin'ny rivotra mitsangana FH
Q turbine rivotra mitsangana
R turbine rivotra mitsangana
Wind Turbine Kilalao
Hitachi no nandresy ny tobim-panonerana herinaratra mahery vaika voalohany nanerantany! Herin'ny rivotra any ivelany ny eropeana
Andro vitsy lasa izay, consortium notarihin'ny goavambe indostrialy japoney Hitachi dia nahazo ny zon'ny tompona sy ny zon'ny asa fampitana herinaratra an'ny tetikasa 1.2GW Hornsea One, toeram-piompiana rivotra lehibe indrindra eto an-tany izay miasa ankehitriny. Ilay consortium, antsoina hoe Diamond Transmissi ...
Karazana herin'ny rivotra
avy amin'ny admin tamin'ny 21-03-06
Na dia misy karazana turbin-drivotra maro aza dia azo fintinina amin'ny sokajy roa izy ireo: turbines rivotra axis marindrano, izay misy ny axis rotation ny kodiaran'ny rivotra amin'ny torolalan'ny rivotra; turbines rivotra mitsivalana, izay misy ny axis rotation ny kodiarana rivotra mifandraika amin'ny gr ...
Inona avy ireo singa lehibe ampiasain'ny turbin-drivotra
Nacelle: ny nacelle dia misy ny fitaovana ilaina amin'ny turbine rivotra, ao anatin'izany ny boaty sy ny milina mpamokatra herinaratra. Ireo mpiasan'ny fikolokoloana dia afaka miditra amin'ny nacelle amin'ny alàlan'ny tilikambo turbine. Ny faran'ny havia nacelle dia ny rotor an'ny mpamorona rivotra, izany hoe ny lelan'ny rotor sy ny hazo. Lasitra rotor: ca ...
Angovo herinaratra herinaratra herinaratra turbinina
Izy io dia manondro ny fizotry ny famokarana hydropower, fuel fossil (arintany, solika, gazy voajanahary) angovo hafanana, angovo nokleary, angovo avy amin'ny masoandro, angovo rivotra, angovo geothermal, angovo ranomasina, sns. Ho angovo elektrika amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana famokarana herinaratra, antsoina hoe famokarana herinaratra. Nampiasaina hanohana ...
Miteraka fifandimbiasana ankehitriny na mivantana ve ny turbinin'ny rivotra?
Ny turbinin'ny rivotra dia miteraka arus ankehitriny hifandimbiasana To satria tsy milamina ny herin'ny rivotra, ny vokatr'ilay mpamokatra herinaratra dia 13-25V ankehitriny mifandimby, izay tsy maintsy ahitsy amin'ny charger, ary avy eo voampanga ny batery fitehirizana, ka ny angovo herinaratra vokarina amin'ny herin'ny rivotra ge ...
Fitsapana azo itokisana ny turbine rivotra
Ireo mpamatsy turbin-drivotra manara-penitra dia tokony hanao fanazaran-tena amin'ny fomba ofisialy hahazoana antoka fa azo itokisana ny kojakoja. Mandritra izany fotoana izany dia ilaina ihany koa ny fanandramana fivorian'ny prototype ny turbinin'ny rivotra. Ny tanjon'ny fanandramana azo itokisana dia ny fitadiavana olana mety hitranga faran'izay haingana ...
Wuxi Flyt New Energy Technology Co., Ltd., dia mpanamboatra matihanina amin'ny rafitra turbine rivotra kely sy salantsalany ary kojakoja mifandraika amin'izany.
Rihana faha-2, faritra misy ny birao, No. 712, Zhenze Road, Distrikan'i Xuelang, Distrikan'i Binhu, Wuxi, Sina